Uvavanyo lwe-aquarium oluthembekileyo lwe-100% esincomela | Ngeentlanzi
Uvavanyo lwe-Aquarium alucetyiswa kuphela, kodwa lunokuthathwa njengesinyanzelo ukugcina umgangatho wamanzi nokuqinisekisa impilo yeentlanzi zethu. Ilula kwaye iyakhawuleza ukusetyenziswa, sisixhobo esinceda bobabini abasandula ukuqala kunye neengcali kwi-aquarism.
Kweli nqaku siza kubona eyona mibuzo iluncedo malunga novavanyo lwe-aquarium.Umzekelo, zeziphi, zisetyenziswa njani, zilinganisa ziphi iiparameter ... Kwaye, ngelishwa, sicebisa ukuba ujonge eli nqaku I-CO2 yee-aquariums, yenye yezinto ezikhoyo emanzini ekufuneka ilawulwe.
150 iiPcs Uvavanyo lweAquarium,...
IMilliard Test Strips...
I-BOSIKE Kit 6 kwimitya e-1...
1 Luyintoni uvavanyo lwe-aquarium?
2 Uyenza kanjani uvavanyo lwe-aquarium
3 Iindidi zovavanyo lwe-aquarium
4 Zeziphi iiparameter ezilawulwa kuvavanyo lwe-aquarium?
4.1 Ikhlorini (CL2)
4.2 Ubumanzi (PH)
4.3 Ukuqina (GH)
4.4 Ityhefu ye-nitrite enetyhefu (NO2)
4.5 Unobangela we-algae (NO3)
4.6 Ukuzinza kwe-PH (KH)
4.7 Ikharbhon diokside (CO2)
5 Kukangaphi kufuneka uvavanye i-aquarium?
6 Iimpawu zoVavanyo lwee-Aquarium ezigqibeleleyo
7 Ungazithenga phi iimvavanyo ze-aquarium ezingabizi kakhulu?
Luyintoni uvavanyo lwe-aquarium?
Ngokuqinisekileyo sele uyiqondile, ukuba unayo i-aquarium, oko Umgangatho wamanzi ubalulekile ukugcina iintlanzi zethu zisempilweni. Ezi zilwanyana zinobuthathaka kakhulu, ke naluphi na utshintsho kwindalo esingqongileyo (kwaye, ngokucacileyo, indawo ekufutshane kakhulu namanzi) inokukhokelela kwiingxaki zempilo kwaye ibe mandundu ngakumbi kwezinye iimeko.
Uvavanyo lwe-Aquarium lusetyenziselwa kanye loo nto, ukuze wazi nangaliphi na ixesha ukuba umgangatho wamanzi ulungile. Ukufumanisa, kuya kufuneka ugcine amanqanaba e-nitrite kunye ne-ammonia ephantsi kolawulo, phakathi kwabanye. Njengoko siza kubona, uvavanyo lwe-aquarium alwenziwa okokuqala nje kuphela xa sibeka amanzi kuyo, kodwa bayinxalenye yesiqhelo yolondolozo lwayo.
Uyenza kanjani uvavanyo lwe-aquarium
Nangona kunjalo kwezinye iivenkile zezilwanyana banikezela ithuba lokuvavanya amanzi kwi-aquarium yakho, apha siza kugxila kwiikiti ezikuvumela ukuba uzenzele uvavanyo ekhaya, ngezizathu ezicacileyo, zezona zinokubangela ukuba ube namathandabuzo, ngakumbi ukuba ungumntu omtsha ku-aquarism.
Umsebenzi wovavanyo ulula, kuba uninzi luqulathe ukuthatha isampulu yamanzi. Le sampuli inemibala (nokuba ngamathontsi okanye ngokuntywila, okanye ngokukunika amanani) kwaye kuya kufuneka uyithelekise netafile, efakwe kwimveliso enye, eya kukuvumela ukuba ujonge ukuba amaxabiso zichanekile.
Iindidi zovavanyo lwe-aquarium
Ke, ikho Iindlela ezintathu ezintle zokwenza uvavanyo lwe-aquarium, Kuxhomekeka kuhlobo lwekhithi: ngemicu, ngamaconsi okanye ngesixhobo sedijithali. Zonke zinokuthenjwa ngokulinganayo, kwaye ukusebenzisa enye okanye enye kuya kuxhomekeka kukhetho lwakho, indawo onayo okanye uhlahlo-lwabiwo mali.
Uvavanyo oluqukethe ikhiti yokuqhekeka kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Ngokwesiqhelo, kukho imicu eliqela kwibhotile nganye kwaye ukusebenza kwayo kulula kakhulu, kuba ibandakanya ukuntywila umcu emanzini, ukuwushukumisa kunye nokuthelekisa iziphumo namaxabiso achazwe kwibhotile. Ukongeza, uninzi lweempawu ezithengisa olu hlobo lovavanyo zibandakanya usetyenziso onokugcina ngalo iziphumo kwaye uzithelekise ukuze ubone ukuvela kwamanzi kwi-aquarium yakho.
Uvavanyo lukaMnu Petz Aqua- 60 ...
Uvavanyo lolwelo yenye indlela elungileyo yokuhlalutya umgangatho wamanzi kwi-aquarium yakho. Zisuka nje kwilulwane zinempembelelo engaphezulu kwemicu, kuba zinemibhobho emininzi engenanto kunye neetoti ezizele zizinto. oza kuvavanya ngayo amanzi (into oza kuyigcina engqondweni ukuba awufuni ukuba uvavanyo luthathe indawo eninzi). Nangona kunjalo, umsebenzi ulula: kufuneka ubeke isampulu yamanzi e-aquarium kwiityhubhu kwaye ungeze ulwelo ukujonga imeko yamanzi.
Ukuba ukhetha olu vavanyo, ukongeza kukuthembeka, Qiniseka ukuba ibandakanya izitikha zokuchonga ityhubhu nganye Kwaye ke ngengozi awudideki xa usenza uvavanyo.
Ekugqibeleni, Uhlobo lovavanyo lwedijithali, ngaphandle kwamathandabuzo, lolona luchanekileyo kwintengiso, nangona zihlala zixabisa kakhulu (nangona, ngokucacileyo, zihlala ixesha elide). Ukusebenza kwayo kukwalula kakhulu, kuba kufuneka ubeke ipensile emanzini. Nangona kunjalo, banengxaki: kukho iimodeli ezininzi ezibandakanya uvavanyo lwe-PH okanye uninzi lweeparameter ezilula, ezithi, ngaphandle kokuchaneka, zishiye ezinye izinto esinokuba nomdla wokulinganisa.
Zeziphi iiparameter ezilawulwa kuvavanyo lwe-aquarium?
Uninzi lweemvavanyo ze-aquarium Babandakanya uthotho lweeparameter zokulinganisa kwaye zezona zichonga ukuba amanzi onawo kwi-aquarium yakho asemgangathweni. Ke ngoko, xa uthenga olu hlobo lovavanyo, qiniseka ukuba balinganisa ezi zinto zilandelayo:
I-klorine yinto enokuba yityhefu emangalisayo ngeentlanzi kwaye zibangele nokufa ukuba azikho ngaphakathi kweeparamitha ezincinci. Ukongeza, inwebu yakho yokubuyela umva kwi-osmosis ingoyiswa kwaye eyona nto imbi kukuba inokufumaneka kwiindawo ezikufutshane njengamanzi etephu. Gcina amanqanaba e-chlorine kwi-aquarium yakho kwi-0,001 ukuya kwi-0,003 ppm ukuze umgangatho wamanzi ungasokoli.
Besikhe satsho ukuba iintlanzi azixhasi utshintsho emanzini, kwaye i-PH ngumzekelo olungileyo woku. Le parameter ilinganisa i-asidi yamanzi, ethi, ukuba ithe yenzeka kulo naluphi na utshintsho oluncinci, inokubangela uxinzelelo olukhulu kwintlanzi yakho. Kwaye bababulale, izinto ezimbi. Kubalulekile ukuba ube namanqanaba acacileyo e-PH kwanaxa ufika usuka kwivenkile yezilwanyana zasekhaya: kuya kufuneka uyiqhelanise intlanzi yakho ngokulinganisa i-PH yevenkile kwaye ngokuthe ngcembe uyenze ibonakale kuleyo yetanki lakho lentlanzi.
Kwakhona, Ubumanzi bamanzi abuyiyo ipharamitha emiselweyo, kodwa luyatshintsha ngokuhamba kwexeshaNjengokutya kweentlanzi, ziyakhupha, izityalo ziye zenziwe ioksijini ... ke, kuya kufuneka ulinganise i-PH yamanzi kwi-aquarium yakho ubuncinci kube kanye ngenyanga.
El Inqanaba le-PH elinconywayo kwi-aquarium liphakathi kwe-6,5 kunye ne-8.
Ubunzima bamanzi, ekwabizwa ngokuba yi-GH (ukusuka kubunzima besiNgesi ngokubanzi) yenye yeeparameter kuvavanyo lwe-aquarium elungileyo olunokukunceda ukuba ulinganise. Ukuqina kubhekisa kwinani lezimbiwa emanzini (ngakumbi i-calcium kunye ne-magnesium). Into enzima malunga nale parameter kukuba kuxhomekeke kuhlobo lwe-aquarium kunye nentlanzi onayo, umlinganiso omnye okanye omnye uya kunconywa. Izimbiwa ezikhoyo emanzini zinceda ukukhula kwezityalo nezilwanyana, yiyo loo nto iiparameter zabo zingenakuba sezantsi kakhulu okanye phezulu kakhulu. Okucetyiswayo, kwi-aquarium yamanzi amatsha, ngamanqanaba angama-70 ukuya kwi-140 ppm.
Ityhefu ye-nitrite enetyhefu (NO2)
I-Nitrite yenye into ekufuneka silumke ngayo, kuba amanqanaba ayo anokuphakama ngenxa yezizathu ezahlukeneyoUmzekelo, ngesihluzo sebhayoloji esingasebenzi kakuhle, ngokuba neentlanzi ezininzi kwi-aquarium okanye ngokuzondla kakhulu. INitrite nayo kunzima ukuyinciphisa, kuba ifumaneka kuphela ngokutshintsha kwamanzi. Kuqhelekile ukufumana amanqanaba aphezulu e-nitrite kwii-aquariums ezintsha, kodwa emva kokuhamba ngebhayisikile kufuneka behle ezantsi. Ngapha koko, amanqanaba e-nitrite kufuneka asoloko ekwi-0 ppm, nanjengoko i-0,75 ppm inokucinezela iintlanzi.
Unobangela we-algae (NO3)
NO3 nayo yaziwa ngokuba yi-nitrate, igama elifana kakhulu ne-nitrite, kwaye eneneni zizinto ezimbini ezinolwalamano olusondelene kakhulu, kuba i-nitrate sisiphumo se-nitrite. Ngethamsanqa, ayinetyhefu encinci kune-nitrite, nangona kufuneka ujonge inqanaba layo emanzini ukuze ingalahli umgangatho, kuba, njenge-PH, NO3 ikwavela, umzekelo, ngenxa yokubola kwe-algae. Amanqanaba afanelekileyo e-nitrate kwi-aquarium yamanzi angaphantsi kwama-20 mg / L.
Ukuzinza kwe-PH (KH)
I-KH ilinganisa isixa se-carbonate kunye ne-bicarbonates emanziniNgamanye amagama, iyanceda ukunciphisa iacids kuba i-PH ayitshintshi ngokukhawuleza okukhulu. Ngokuchasene nezinye iiparameter, i-KH ephezulu yamanzi, ingcono, njengoko kuya kuthetha ukuba mancinci amathuba okuba i-PH iguquke ngesiquphe. Yiyo loo nto, kumanzi acocekileyo i-KH ecetyiswayo yi-70-140 ppm.
Ikharbhon diokside (CO2)
Enye into ebalulekileyo ekusindisweni kwe-aquarium (ngakumbi kwimeko yokutyala) yi-CO2, zibalulekile kwizityalo ukuze zenze ifotosinthesisi, nangona zinetyhefu ekulobeni kakhulu. Nangona uxinzelelo olucetyiswayo lwe-CO2 luya kuxhomekeka kwizinto ezininzi (umzekelo, ukuba unezityalo okanye akunjalo, inani leentlanzi ...) umndilili ocetyiswayo yi-15 ukuya kuma-30 mg kwilitha nganye.
Kukangaphi kufuneka uvavanye i-aquarium?
Njengoko ubonile kulo lonke inqaku, Kubaluleke kakhulu ukwenza uvavanyo lwamanzi e-aquarium rhoqo, nangona konke kuxhomekeke kumava onawo ngesihloko. Kwabaqalayo, umzekelo, kuyacetyiswa ukuvavanya amanzi rhoqo emva kweentsuku ezimbini okanye ezintathu, nje emva kokuhamba ngebhayisikile i-aquarium entsha, ngelixa iingcali uvavanyo lunokwandiswa kube kanye ngeveki, rhoqo kwiintsuku ezilishumi elinesihlanu okanye kwinyanga.
Iimpawu zoVavanyo lwee-Aquarium ezigqibeleleyo
Nangona kunjalo zininzi iimvavanyo ze-aquarium kwintengisoKubalulekile ukukhetha enye elungileyo nethembekileyo, kungenjalo ayizukusinceda nganto. Ngale ndlela, iintlobo ezimbini ezibonakalayo:
Uvavanyo lwe-Tetra Pond 6 kwi-1,...
I-Tetra yenye yeempawu ebezisoloko zikho kwihlabathi lwaselwandle. Eyasungulwa ngo-1950 eJamani, ayibonakali nje kuphela kwimigca yayo yokuvavanya i-aquarium kunye namanzi echibi, kodwa kunye neentlobo ezahlukeneyo zeemveliso kuquka iimpompo, imihlobiso, ukutya ...
JBL ProScan Amanzi...
Olunye uphawu lwaseJamani lodumo olukhulu kunye nokuthembeka, olwaqala ngo-1960 kwivenkile encinci yengcali. Uvavanyo lwe-JBL lwe-aquarium lunobunkunkqele kwaye, nangona benemodeli enemicu, eyona nto ikhethekileyo kwiimvavanyo zokuwa, apho baneepakethe ezininzi ezizalisekileyo, kunye neebhotile zokutshintsha.
Ungazithenga phi iimvavanyo ze-aquarium ezingabizi kakhulu?
Ungacinga njani Uvavanyo lwe-aquarium luyafumaneka ngakumbi kwiivenkile ezizodwa, kuba ayiyiyo imveliso eyaneleyo ngokubanzi ukuba ifumaneke naphi na.
Ke, indawo apho unokufumana khona uninzi lweemvavanyo ukulinganisa umgangatho wamanzi akwi-aquarium yakho Amazon, Apho kukho imicu yovavanyo, amathontsi kunye namanani ukunika kunye nokuthengisa, nangona kwa loo nto inye yeempawu ezinokubakho bumdaka, ngakumbi ukuba ungowokuqala kwesi sihloko.
Kwelinye icala, kwi iivenkile ezikhethekileyo ezinje ngeKiwoko okanye iTiendaAnimal Awunakufumana iintlobo ezahlukeneyo njengakwiAmazon, kodwa iimveliso abazithengisayo zithembekile. Kule venkile unokufumana iipakethi kunye neebhotile enye, kunye neengcebiso ezizezakho.
Siyathemba ukuba eli nqaku kwiimvavanyo ze-aquarium likuncede ukuba ungene kweli hlabathi linomdla. Sixelele, uwulinganisa njani umgangatho wamanzi kwi-aquarium yakho? Ngaba ukhetha uvavanyo ngemicu, ngamaconsi okanye ngokwedijithali? Ngaba kukho uphawu olucebisa ngokukhethekileyo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » Uvavanyo lwe-Aquarium